Wararka Maanta: Sabti, Nov 17, 2012-WASIIRKA ARRIMAHA DIBADDA JABUUTI: "Soomaaliya waxay u baahan tahay lacag fara badan oo dib loogu dhiso"
Mudane Yuusuf wuxuu sheegay in dalkiisu uu hormuud u yahay qabashada shir-weyn lacago loogu ururinayo Soomaaliya, isagoo xusay in Soomaalidu ay ka daashay lacago yaryar oo loogu deeqo, balse hadda loo bahan yahay in Soomaaliya dib loo dhiso.
"Soomaaliya waxay u baahan tahay in loo qabto shirweyne dhaqaale fara badan loogu ururinayo si dib u dhis loogu sameeyo," ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti oo VOA-da la hadlayay kaddib markii lagu soo gabgabeeyay xarunta dalka Jabuuti shirkii Ururka Iskaashiga Islaamka.
Wasiirku wuxuu daboolka ka qaaday in qodobbadii kasoo baxay shirka iskaashiga Islaamka ee Jabuuti lagu qabtay uu ka mid ahaa in dhaqaale loo ururiyo Soomaaliya si dib loogu dhiso, isagoo xusay in Jabuuti ay mar hore billowday sidii shir dhaqaale ururin ah loogu qaban lahaa Soomaaliya.
"Soomaalidu way ka daaleen deeqo yar-yar oo la siiyo. Maantana awood uma lahan inay dalkooda dib u dhistaan; waxaase loo baahan yahay in caalamka uu dhaqaale balaayiin doollar ah u ururiyo si dib loogu dhiso," ayuu hadalkiisa ku daray wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti.
Maxamuud Cali Yuusuf, wuxuu hoosta ka xariiqay in dib u soo laabashada horumarka iyo nabadd Soomaaliya ay ku xiran tahay dib guud oo dalka lagu sameeyo, isagoo ugu baaqay caalamka inay gacan ka geystaan sidii Soomaaliya mar kale dib loogu dhisi lahaa.
Shirka lagu soo gabgabeeyay dalka Jabuuti ayaa waxaa Soomaaliya uga qayb-gashay ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan, iyadoo ka baaqatay dhaartii golaha wasiirrada cusub ee xukuumadda Soomaaliya.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti wuxuu sheegay in dalalka Islaamku ay billaabeen dadaallo ay ku doonayaan in lagu hakiyo duqeymaha ay Israa'iil ku hayso shacabka reer Falastiin ee ku nool marinka Gaza.